QM oo walaac Xoogan ka muujisay Xaalada Cakiran ee Soomaaliya.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ka hadlay xiisadaha ka soo cusboonaday magaalada Muqdisho isagoo sheegay inuu ka walaacasanyahay xaaladda hadda ka taagan Soomaaliya, kaddib shaqaaqooyinkii Axaddii ka dillaacay magaalada Muqdisho.
War-saxaafadeed ka soo baxay afhayeenka Xoghayaha Guud Stephane Dujarric ayaa lagu sheegay inuu xoghayaha guud uu aad uga walaacsanyahay iska hor imaadyadii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
“Xoghayaha guud wuxuu aad uga walaacsan yahay iska hor imaadyadii hubeysnaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho.”
Wuxuuna baaqiisa ku sheegay in dhamaan saamilayda Soomaaliyeed ay ka joogsadaan rabshado dambe oo ay ku xalliyaan khilaafaadkooda wadahadal iyo isu-tanaasul.
“Wuxuu mar kale ku celinayaa baaqiisa ah in dhammaan daneeyayaasha Soomaaliyeed ay ka waantoobaan qalalaase dambe oo ay ku xalliyaan khilaafaadkooda wadahadal iyo tanaasul.”
Xoghayaha guud ayaa waxa uu ku booriyay dhamaan saamilayda Soomaaliyeed inay si dhakhso leh dib ugu bilaabaan wadaxaajoodka isla markaana ay abuuraan heshiis ku saleysan qaabkii doorashada ee 17kii Sebtember soo jeedintii Baydhabo.
« Banaanbax ka dhan ah Farmaajo oo Caawa Gil gilay Muqdisho.
Beesha Caalamka oo War ka soo saartay Xaalada Dalka. »